Taariikhda My Butros » Waayo, jacaylka Butros ah
Waayo, jacaylka Butros ah
Last updated: Aug. 02 2020 | 2 min akhri
Waxaan ahay qof aad u xisaabiyay. Wax walba oo aan sameeyo si fiican loo qorsheeyay, waayo, wax aan sameeyo waa mid aad istiraatiiji ah. Marka la go'aansanayo in aan doonayay xayawaanka ah, Waxaan si taxaddar leh u maleeyeen ku saabsan xiliga la, kharashka dhaqaale oo ay weheliyaan xidhiidhka mudada dheer ee ah in aan wada lahaa. Maxaan ma xisaabiyo ahayd habka aan cat, Beau i badbaadin lahaa.
In aan shan iyo labaatan sannadood, Waxaan ruuxaas nolol adag. In dhexdeeda dhan ah, cimrigaygu u muuqdaan kuwo sii dhalaal dheer, oo ka xisaab fududaan og in cat dhammaan way sugi ee ii guriga. My keli ahaansho waa la maareyn karo sida Beau bixisaa saaxiibin feeri oo mar walba diyaar u yahay inuu ku siin raaxo leh xukunka no. Maalmaha xayawaanka guriga saacad-dheer halka hab-siinta iyo isagoo ilmo iska tiraya bixisaa gargaar oo kale iyo nasashada badan ayaan ka fikiray noqon doono in. Maalmood ayaa la fadhiyo play saacad-dheer ka buuxsamay qosol siisaa farxad badan ayaan ka fikiray noqon doono in. Jacaylka xayawaanka dhab ah la bogsiinayay karaan.
Mid ka mid ah sababaha aan doonayay xayawaanka la ahaa si ay uga caawiyaan la ii sii kordhaysa dareen hooyo. Waan ogaa in jacaylka xayawaanka aan iga caawin doonaan inaan rogi doonaan hooyada in aan doonayo iyo u baahan tahay inaad carruurtayda mustaqbalka. Beau ee ku tiirsanaanta baa i tusay mas'uuliyadda iyo allabari oo looga baahan yahay inay si dhab ah u reeb iyo caawiyaan nool midka kale. Bedelkeeda, Jacaylkiisuna wuu shuruud la'aan ayaa i jecel qoto dheer. Waxa uu i tusay jacayl ah in aan marnaba ogaa suurto gal ahayd. Jacaylka xayawaanka runtii aad bari kartaa micnaha jacaylka.
Dadaal My xisaabiyaa ku heli lahayd xayawaanka aan i hoggaamiyey on saddex-saac masaafo baabuur guud ahaan gobolka Michigan. Marka ay bilaabayaan gurmadka, mid ka mid ah bisada u yimid xaq badan igu, jideeyey on dhabtayda, iyo inuusan ka tagi doono. Waxaan ahaa sheegatay. Laga soo bilaabo maalintaas wixii ka dambeeyey, my cat iyo waxaan lahaa dhigaal gaar ah. Beau waa mid aad saaxiibtinimo, ku dhawaad ​​eey u eg laakiin waxaa aad u sheegtid qof. Kulan badan oo aan saaxiibo iyo kooxaha sanadihii la soo dhaafay, Beau ayaa mar kale iyo mar kale cadeeyay inuu awooda si sax ah u xukumaan qof. I, dhab ahaantii, hadda isaga u rogaan sharaaxadda. Jacaylka xayawaanka dhab tusi kartaa dabeecadda iyo intension dadka kale.
Imaatinka guriga ka jabay iyo isagoo yar in ay xiriir ma la aabaheey igu soo hoggaamiyey, si ay u noqdaan xiran-off. Taas darteed, marka aad dooranayso xayawaanka aan, Waan ogaa in ay ahayd in ay noqdaan lab. Dabeecadda daryeel iyo jaceyl in waan muujiyey Beau ayaa markeeda waxay isagii hor geeyeen si ay u noqdaan cat aad u jecel. Uu ku tiirsanaan ii on baa i tusay sida ay u nugul inuu si dhab ah waa in xiriirkan. Jacaylka in Beau baa i tusay igu siinaysaa rajo, waayo, isagu wuxuu u waxyoonay ii kor u furo oo noqday nugul. My cat ayaa i tusay jecel qof kale mar walba waa halista. Jacaylka xayawaan rabaayad ah run ahaantii siin karaan rajada.
Best Talooyin Taariikhda First for Men
Dating iyo Xiriirka Advice – Law of Attraksjon
4 Tips for Date a First
Hamiyeysaa in ximnaha,: Sidee A Good Dog rabbeeyey A Woman Bad